Iyo Apple Watch inoenderera ichiponesa hupenyu, ino nguva yemurume muNew York | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti kupfeka Apple Watch pachiuno chako kuri kuita zvinopfuura kungova newatchwatch pachiuno chako uye ndizvo Kune atovepo makesi akati wandei akanyorwa umo ichi chidiki diki chakachengetedza hupenyu hwemunhu.
Mune zvimwe zviitiko tinogona kutaura kuti rubatsiro rweApple Watch rwakauya nenzira "yekugona kufona kana paitika tsaona" mune vamwe nekuda kwekugara uchitariswa kunoitwa neiyo yemoyo sensor (yakanyanya kuitika mune musikana ane makore 18) uye izvozvi zvaWilliam Monzidelis, uyo mushure mekuita dzungu akapinda muchimbuzi uye Apple Watch yakabva yamuzivisa kuti atsvage rubatsiro rwechimbi-chimbi.
Kune rimwe divi, iyi ndiyo nyaya ichangoburwa yemukadzi wechidiki ane itsvo kukundikana musi waMay 1, umo Apple Watch yake "yakamuimbira". 190 kurova paminiti:
Nhau senge dzaDeanna dzinotikurudzira kuti tirote hukuru uye nekumanikidza zvakanyanya mazuva ese. https://t.co/O7xJ9n1MHg
- Tim Cook (@iku_cook) May 1 we2018
Monzidelis akarasikirwa neinosvika makumi masere muzana yeropa rayo
Zvinoita sekudaro dambudziko mune iyi yaive ronda uye mushure mekupinda muchimbuzi cheiyo nzvimbo yakanyanyisa dzungu, akatanga kubuda ropa nekukurumidza uye yake Apple Watch yakamuzivisa iye nekukasira kuti atsvage rubatsiro rwekukurumidza rwekurapa.
Nhau dzakaburitswa pakati NBC New York Anoti Monzidelis akaendeswa mumota yaamai vake uye yaive izere neropa mushure merwendo rwehafu yeawa kuenda kuchipatara. Pane imwe nguva chipatara chakasimbisa izvozvo murwere aive neronda uye akarasikirwa neropa rakawanda, kunyanya 80%. Akangodzikamiswa uye mushure mekuisirwa kakawanda, murwere aigona kuvhiyiwa uye vanachiremba vanotsanangura kuti wachi ndiyo kiyi yekuziva chirwere chake chitsva. Zvinopera pasina kutaura kuti kana paine kurasikirwa kweropa kamwe kamwe uye pasina chikonzero chiri pachena, chinhu chake kuenda kuchipatara nekukurumidza sezvazvinogona.
Vanachiremba vakaudza Monzidelis kuti dai asina kugamuchira chiziviso cheApple Watch yake "angadai asina kupona pahutano hwake hwekurapwa" asi zviri pachena kuti zvinhu zvakawanda zvinoshanda muchirevo ichi. Chero zvazvingaitika izvi uye izvo zvevechidiki Deanna, anga ari iwo achangopfuura zviitiko mune izvo iyo Apple Watch yakawedzera kukosha pane kungogamuchira zviziviso, kufona kana kuverenga macalorie akapiswa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inoenderera ichiponesa hupenyu, ino nguva yemurume muNew York
Google inorova Siri kuna mubatsiri wayo